Raadinta xagaaga ee ugufiican ragga - Dharka Ragga ee Qaabka | Ragga Stylish
Raadinta xagaaga ugu fiican ee ragga
Alicia tomero | | fashion, Isbeddellada
Haddii aad jeceshahay moodada oo aad raacdo isbeddellada cusub ee muuqaalka xagaaga ee ugu wanaagsan, laga yaabee inaad fiiriso wax walba oo ku habboon dharka sannadkan. Guga sidoo kale waxaa ka buuxa maalmo diiran iyo waxaan had iyo jeer sharad ku saabsan moodooyinka cusub inaad bilowdo gelitaanka xagaaga.
Surwaal dhaadheer iyo shaarar gacmo dhaadheer waa la masaafuriyey oo dharkaas xagaaga oo dhami naftooda ayey u banneeyaan. Sannadkan waxaan mar kale sharad ku dhigeynaa midabada… iyo funaanado
1 Jaakadaha ama jaakadaha
4 Gaaban iyo bermudas
Jaakadaha ama jaakadaha
Iyagu waa Mareykan iyo dabcan, gacmo dhaadheer, laakiin kama maqnaan karaan gudaha armaajo markasta oo sanadka ah. Waxay jeceshahay inaad xirto iyaga habeenadaas qabow, labadaba labbiska iyo inay noqdaan kuwo xarrago leh. Isbedelada sanadkaan waxay la mid yihiin ficil ahaan sanadahan oo dhan ka hor, oo isla Slim la jaray, la jaanqaadayo jirka oo wax yar calaamadeenaya dhexda.
Midabada dejisa qaabka ayaa ah midabada cawl iyo buluug, laga bilaabo kan ugu fudud ilaa kan ugu madow. Sidoo kale ma seegi kartid jaakadda madow ama caddaan ah, ee ku habboon in la xidho marka qorraxdu sii dhacayso. Baalashleyaasha aan ku tusinayno waxay leeyihiin qoorta dhabta dhabta ah iyo jeebabka dhinaca, ku habboon in labadaba lagu xirto jooniska ama surwaalka dharka.
Shaatiyada ayaa sidoo kale xoog leh, kuwa gacmo gaabana waa kuwa ugu fiican ee u adkeysan kara saacadaha caburinta. Waxaa jira qaabab, midabbo iyo qaabab dhammaan kooxaha iyo qaababka. Shaatiyada ugu badan ee la gashado waa daabacadaha Nooca Hawaii ama sawirro aan caadi ahayn, Karbaashka iyo shaatiguba waxay ku soo noqdaan gabi ahaanba caddaan ama midabyo jilicsan oo aad u hooseeya.
Shaati nooca khafiifka ah iyo nashqado ballaadhan ayaa xidhan Sida shaatiga sawirka kujira, in lagu xiro banaanka surwaalka oo ay ku jiraan jeebado balastar ah oo feeraha ku laaban yihiin. Shaatiga xariijimaha ah ayaa ku habboon dabacsan, oo leh qoorta bowling iyo shaati oo leh midab daabacan oo keliya ayaa leh xabbad yar oo xabadka ah.
T-shaati waa dharka la doorbido in la xidho xagaaga, ficil ahaan dhammaan noocyada waa la gashaday waxaanan xoojin karnaa in kuwa u roon kuwa ugu badan ay yihiin kuwa leh midabyo dhalaalaya, oo leh midabbo dhexdhexaad ah, midabyo jilicsan oo iftiiminaya Midabka Coral. Iyo gaar ahaan cadaan badan. Waa in la ogaadaa in shaati-yada layaabka leh ay isku daraan weyn iyo surwaal cad.
Funaanadaha ku jira sawirrada ayaa tusaale u ah waxa dhici kara xagaagan, funaanadda cagaaran waa mid ka mid ah hooska indhaha qabanaya intee in le'eg ayay u xaglinayaan, sidoo kale badmaaxa u eeg waa waxa xidhan, sharad shaati ah oo leh daabacado xarrago leh iyo midabbo buluug ah. Sharad kale waa mid ka mid ah shaatiyadaha leh dhuxusha buluug dhuxul ah, oo leh qoorta wareegsan oo loogu talagalay jeebka balastarka xabadka.
Gaaban iyo bermudas
Waxaan xirneyn surwaal aad u gaaban dhowr xilli si aan u muujino lugaha, laakiin sanadkan Waxaan horeyba u arki karnaa moodello jilbaha ka jaban. Waxaa jira noocyo kala duwan, laga bilaabo jiinis leh feeraha u dhigma oo muhiim ah qaabka magaalada, ee ciyaaraha isboortiga oo leh dhar fudud oo qeexaya dhexda iyo jeebabka dhinacyada. Waxay u heellan tahay midabbo leh codad jilicsan, sida caddaan, beige, shacaab iyo midabbo xoog leh sida madow iyo buluug buluug ah.
Surwaalada aan soo bandhigeyno waa jiinis u eg qaabka denim iyo goyn ku habboon ama cidhiidhi ah, leh saameynta maydhashada iyo ilmada badan lugaha. Saraawiisha soo socota ayaa midab leh buluug buluug ah oo leh cudbi isku dhafan iyo qalabka linenka, oo leh astaamaha lahaanshaha jeebado balastar ah oo leh xarkaha dhinacyada lugaha. Dharka hoose ayaa ku habboon in lagu xidho blazer iyo astaamo isku mid ah surwaal xarrago leh oo aan lahayn fallaadho. Kuwa soo socda ayaa leh muuqaalka kore ee bermuda gaagaaban oo leh dhexda laastikada oo la hagaajin karo isla markaana si heer sare ah looga ganacsado si fudud oo wax ku ool ah.
Iyagu waa kuwa gaagaaban ee yar yar ee ay xirtaan xagaagan oo ay u muuqdaan kuwa midabkoodu wanaagsan yahay. Dharka dabbaasha, oo ka duwan kuwa gaaban, ayaa gaabin doona. Waxaad ku sharad taas Nooca caatada ah ee la gooyey iyo qaabka, in loo xirto rag aan dhib ka qabin in la muujiyo jirkooda oo laga difaaco raaxadooda iyo dareenkooda.
Sannadkan waxaan ku sharadnaynaa dharka dabbaasha leh kuwo badan daabacado jajab ah iyo qaabab ubax Hawaiian ah. Waxaa jira midabbo aan tiro lahayn oo la soo bandhigo maxaa yeelay dhammaantood waa kuwo faraxsan oo xiiso leh. Dharka inta badan loo isticmaalo dukaamada waaweyni waa kuwa isticmaalka labaad, asal ahaan dib loo warshadeeyay, Qalajinta degdegga ah iyo dammaanad qaadka ilaalinta sare.
Si aad waxbadan uga akhriso isbeddelada ugu dambeeyay xagaagan waxaad ka akhrisan kartaa «moodooyinka kabaha trekking ", kan ugu fiican"muraayadaha dhakhtarku qoro ee isbeddelaya»Ama hadaad jeceshahay inaad timo ku moodo timo, maxay yihiin«goos gooska ugu fiican«.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Raadinta xagaaga ugu fiican ee ragga
Timaha loo xiiray ragga